यस्तो अनौठो अपराधमा कप्तान विराट कोहलीलाई २० लाख जरिवाना ! « The News Nepal
यस्तो अनौठो अपराधमा कप्तान विराट कोहलीलाई २० लाख जरिवाना !
काठमााडौं । पछिल्लो समयमा चर्चित क्रिकेटर विराट कोहलीमाथि कारबाही गरिएको छ । रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरका कप्तान विराट कारबाहीमा परेका हुन् । आईपीएलमा लगातार ६ खेलमा पराजय भोगेको बेंग्लोरले शनिबार राति किंग्स इलाभेन पञ्जाबलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै हारको श्रृंखलामा अन्त्य गरेको थियो ।तर उक्त खेलमा जित हात पारे पनि कप्तान कोहलीले भने कारबाहीमा भोग्नु परेको हो ।
लगातार ६ खेलमा पराजय भोगेको बेंग्लोरले शनिबार राति किंग्स इलाभेन पञ्जाबलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै हारको श्रृंखलामा अन्त्य गरेको थियो । उनलाई ‘स्लो ओभर रेट’ का कारण कारबाही गरिएको हो । पहिलो पटक कारबाहीमा परेका उनलाई झण्डै २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । अर्को पटक यस्तै गल्ती गरे एक खेलमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइएको छ ।
आईपीएलको ३१ औं खेलमा आज वानखेड़े स्टेडियममा मेजबान मुम्बई इन्डियन्स र रोयल चैलेन्जर्स बेगलुरु भिड्ने भएका छन् । खेलको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कले प्रत्यक्ष प्रशारण नेपाली समयअनुसार ८ः१५ मिनेटमा हुने जनाइएको छ । एजेन्सी